डब्ल्युएचओको चेतावनी: आगामी दिनमा देखियाे यस्ताे संकेत, अब बिश्व के हाेला ? – Khula kura
डब्ल्युएचओको चेतावनी: आगामी दिनमा देखियाे यस्ताे संकेत, अब बिश्व के हाेला ?
कारण विश्वभर झन्डै १ लाख १५ हजार स्वास्थकर्मी तथा केयर वकर्सले ज्यान गुमाएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का प्रमुख टेडरोस अद्हानोम ग्रिबियससले बताएका छन् ।‘धेरै संक्रमित भएका छन् ।
हाम्रो अनुमानमा कम्तिमा १ लाख १५ हजार स्वास्थ्यकर्मी र केयर वकर्सहरुले अन्यको सेवा गर्ने क्रममा आफ्नो ज्यानको मूल्य चुकाएका छन्’ विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै ग्रिबियससले भने ।
महामारी सुरु भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै रहेको उनले चेतावनी दिए । अहिलेकै अवस्थालाई नियाल्दा, विगत वर्षभरि जुन संख्यामा मृत्यु भएको थियो,
त्योभन्दा धेरै संख्यामा मानिसहरु आगामी दिन महिने अवधिमा मर्ने देखिएको उनले चेतावनी दिए।‘अहिलेसम्म खोपको प्रभावकारितालाई अति अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि भेरिएन्टको उदय भएको छैन ।
तर, यस्तै अवस्था रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन’ उनले भने, ‘हामी धेरै स्पष्ट हुन जरुरी छ । महामारी समाप्त भएको छैन । र, हरेक देशमा फैलावट नियन्त्रण नभएसम्म यो सकिने वाला छैन ।
’जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विश्वभर ३४ लाखभन्दा धेरै मानिसले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै, १६ करोड ७० लाखभन्दा धेरै मानिस भाइरसको सम्पर्कमा आइसकेका छन् ।
त्यस्तै तपाईलाई मधुमेह छ भने कोरोनाका यी पाँच लक्षणलाई बेवास्ता नगर्नुहोस।दीर्घ रोगीका लागि कोरोना थप खतरनाक साबित भइरहेको छ । मधुमेह पनि ती दीर्घ रोगमध्ये पर्छन् जसले कोरोनाका बिरामीको समस्यालाई थप बढाइरहेको छ ।
हुन त कोरोनाको दोस्रो लहरले स्वस्थ व्यक्तिहरुलाई पनि आफ्नो चपेटामा पारिरहेको छ तर पनि मधुमेहका रोगीमा यसको गम्भीरता अलि बढी नै देखिएको छ ।
ब्लड सुगरको खराब स्तरले इन्सुलिनको उत्पादनमा असर पार्छ र यसका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ । यसबाहेक मधुमेहका बिरामीको रक्त सञ्चार पनि राम्रो हुँदैन त्यसैले उनीहरुलाई निको हुन अलि समय लाग्छ ।मधुमेहका बिरामीलाई यदि कोरोना भएको छ भने यसका लागि भाइरल लोडसँग लड्न थप मुश्किल हुनेगर्छ ।
यतिमात्रै होइन, उनीहरुमा अन्य थुप्रै रोग देखिने खतरा बढ्ने गर्छ । कोरोना भएपछि मधुमेहका बिरामीमा मुटु, साससँग सम्बन्धित समस्या र फोक्सोको रोग लाग्ने सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
छालामा डाबर र नङमा असरः दोस्रो लहरमा धेरै मानिसहरुलाई साधारण लक्षण अघि छालामा डाबर देखिने, सुन्निने वा एलर्जीजस्ता समस्या महसुस भइरहेको छ ।
जस्तै कि हात–खुुट्टाका नङमाथि असर देखिन थाल्छ र छालामा रातो धब्बाजस्तो लक्षण ती कोरोनाका बिरामीमा धेरै पाइएका छन् जसको ब्लड सुगर लेभल अत्यधिक छ ।
मधुमेहका बिरामीको घाउ चाँडै निको हुँदैन । हाई ब्लड सुगरका कारण छाला अत्यधिक रुखो हुन्छ । यसबाहेक छाला सुन्निने, रातो धब्बा, फुस्रो हुने सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
यी सबै चिज कोरोना लाग्दा पनि हुनसक्छ । त्यसैले मधुमेह भएका कोरोनाका बिरामीले आफ्नो छालाको विशेष ध्यान राख्न आवश्यक छ र सुरुवाती लक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
अक्सिजनको कमीः दोस्रो लहरमा कोरोनाका बिरामीमा अक्सिजनको कमी सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । मधुमेहका बिरामीको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने बित्तिकै ती मानिसहरुमा अक्सिजनको कमीको खतरा थप बढ्ने गर्छ ।
मधुमेहका बिरामीलाई सास फेर्न समस्या र छाती दुख्नेजस्ता लक्षण बढी पाइएको छ । यसबाहेक हाइपोक्सियाको पनि सबैभन्दा बढी खतरा मधुमेहका बिरामीलाई नै देखिएको छ । हाइपोक्सियामा बिन कुनै लक्षण अक्सिजन लेभल कम हुन थाल्छ ।
कोभिड निमोनियाः कोरोनाका बिरामीलाई निमोनिया खतरनाक साबित हुनसक्छ । विशेषगरी उनीहरुलाई जसलाई पहिले नै मधुमेहको खतरा छ । बढेको ब्लड सुगरले साससँग सम्बन्धित समस्या बढाउँछ जसका कारण कोरोना थप गम्भीर हुने गर्छ ।
डाक्टरका अनुसार मधुमेह उच्च भइरहेका बेला भाइरस निकै सजिलै शरीरमा फैलिने गर्छ र अन्य अं’गलाई खरा’ब गर्न थाल्छ । स्राेतः नागरिक खाेज
पोखरामा पहिलाे पटक ज्ञानेन्द्र शाहीले छड्के हानेपछि लियाे यस्ताे माेड… (भिडियाेसहित)